Actor-ka Schwarzenegger (Commando) oo jaariyadiisii uureeyey, xaaskiina… (Sawiro) – SBC
Actor-ka Schwarzenegger (Commando) oo jaariyadiisii uureeyey, xaaskiina… (Sawiro)
Posted by editor on May 19, 2011 Comments
Actor-ka caanaka ah Arnold Schwarzenegger oo ay Soomaalidu u taqaan Commando kuna soo caanbaxay filimkii Commando ee la sameyeey sanadkii 1985-tii ayaa todobaadkan waxaa la soo gudboonaatey xaalad fadeexad aad u adag oo sababtey in xaaskiisa ay kala tagaan (Is furan).
Maria Shriver oo ah xaaska Mr Schwarzenegger isla markaana ah gabar saxafiyad ah oo qortey 6 buug oo aad u gamday ayaa ka qaracantay ka dib markii ninkeeda uu uur u yeelay gabar guriga uga shaqeynaysay taasi oo uu ka dhalay wiil isla markaana mudo la qarinayey.
“Tani waa mid aad u xanuun badan isla markaana qaracana oo wadne goyn ah” ayey tiri Maria Shriver.
Maria & Schwarzenegger (Commando) waxay is qabeen mudo 25 sano ah waxaase guurkaasi oo daaqada ka baxay ka dib markii bishii January uu Schwarzenegger u sheegay xaaskiisa in ay jirto gabar gurigooda ka shaqeysanay oo uu wiil ka dhalay.
Wargeyska ka faalooda arimaha dadka caanka ah ee sida Actor-ada & fanaaniinta ee lagu magacaabo TMZ & shabakada Internet-ka ee Radar Online ayaa ka soo xigtey ilo wareed oo la qariyey in haweenayda ilmaha u dhashay ee uu uurka u yeelay Schwarzenegger lagu magacaabo Mildred Patricia Baena oo 50 sano isagoo uurka u yeelay mudo haatan laga jooogo 20 sano.
Schwarzenegger oo haatan 63 sano isla markaana caan ku noqdey filimaanta weerada (actions) sida Commando & Terminator ayaa shaley wuxuu shaaca ka qaaday xaaladan fadeexo ee la soo gudboonaatey isagoo qirtey in uu si qarsoodi ah haweenay uu ka gaabsadey in magaceeda uu sheego uu uur u yeelay, waxaana uu sheegay in aad uga xunyahay arintaasi.
Sawir la soo galiyey bar Internet oo arimaha xiriirka dadweynaha ayaa waxaa ka muuqanaya haweenayadii jaariyada ka aheyd guriga Schwarzenegger oo haysata wiil aad ugu eg Schwarzenegger.
Mildred Patricia Baena waxay guriga Schwarzenegger adeegto ka aheyd mudo 20 sano ah waxaana ay qaadan jirtey 1200 doolar todobaadkii iyadoo hawsheedu aheyd cunto karinta, nadiifinta dhulka & alaabta, iyo waliba dhar dhaqiqda, laakiin haweenaydu kuma nooleyn guriga ku fadhiya qiimaha 11 milyan oo doolar ee uu leeyahay Mr Schwarzenegger ee ku yaal xaafada Brentwood ee magaalada Los Angeles.
Bishii January ee sanadkan ayay shaqadaasi gacanta ka taagtey oo ay sheegtey inaanay ka sii aheyn jaariyad, xiligaasi oo ahaa dhamaadkii waqtigii labaad ee Mr. Schwarzenegger ay uga ekeyd gudoomiyenimada gobolka California ee wadanka Mareykanka.
Inkastoo Mr Schwarzenegger uu xaaskiisa mudo sanooyin ah daboolka ka saarayey xaaladan hadana goor dambe ayuu u sheegay, waxaana taasi ay keentay in Maria Shriver ay isgaa tagto gurigii ay kula nooleyd Mr Schwarzenegger (Commando), iyadoo 9-kii bishan May dalbatey furiin.
Miss Shriver oo 55 sano jir ah waxay isku dhaleen afar caruur ah Mr Schwarzenegger waxaana ay sheegtey in haatan waxa horyaal inay yihiin xaalada ilmaheeda.
Habeenimadii Isniinta ayaa si rasmi ah loo arkey Miss Shriver tan iyo markii uu soo shaac baxay fadeexada ninkeeda iyadoo la joogtey haweenayda caanka ah ee ay saaxiibka yihiin Oprah Winfrey.
Ma ahan markii ugu horeysay ee Mr Schwarzenegger lagu soo oogo fadeexo haween uu uur u yeelay, sanadkii 2003-dii markii uu ku jiray olalaha tartanka doorashada gudoomiyaha gobolka California xidiga Hollywood waxaa faraqa qabsatey Tammy Tousignant oo shaqaale ka aheyd diyaarada khaaska ah ee uu leeyahay Mr Schwarzenegger, iyadoo ku andacootay in uu u hayso ilmo Mr Schwarzenegger ilmahaasi oo uu Aabe u yahay.
Laakiin qareenka Tammy ninkeeda ayaa isagu sheegay in ilmahaasi aanu dhalin Mr Schwarzenegger oo leeyahay ninka qaba haweenadaasi lagu magacaabo Tammy Tousignant.
Si kastaba ha haatee Mr Schwarzenegger hadal qoraal ah oo uu saxaafada ka hor aqriyey ayuu wuxuu ku sheegay in uu qirsan yahay qaladka uu galey, isla markaana uu ka raali galinayo xaaskiisa, caruuriisa & saaxiibadiis, balse hadalkiisu uma muuqanayo mid ay ku qanci karto Maria Shriver oo rajo beel ka qaaday.